XOG: Man United oo tallaabo qolka labiska sii dhibaateyn karta u qaadeysa sidii ay ku celin laheyd Paul Pogba. – Gool FM
(Manchester) 18 June 2019. Manchester United ayaa diyaar u ah iney qaab walba ku joojiso rabitaanka xiddigooda reer France Paul Pogba kaas oo doonaya inuu kooxda isaga guuro, balse waxey qaadayaan tallaabo laga yaabo iney sii qasto qolka labiska.
Red Devils waxey diyaar u tahay iney Paul Pogba mushaar dheeri ah siiso si uu garoonka Old Trafford usii joogo isla markaana kooxda uga mid ahaado, waxeyna wararka qaar sheegayaan in maamulka ay diyaarinayaan qorshe ay ku siinayaan isbuucii 500,000 kun oo Pound.
Paul ayaa ka yaabiyay dadyowga kubadda cagta isbuucaan kadib markii uu sheegay inuu tartan cusub u raadsanayo meel kale, waxaana lasoo wariyay markii hore in kooxda shayaadiinta ay xiddigooda duldhigeen 150 Malyan oo Pound si ay kooxaha qaaradda yurub uga fogeeyaan iney u dhaqaaqaan.
Mail ayaa faafisay in Red Devils ay markaan raadineyso xal kale oo aan aheyn iney lacago duldhigto madaxiisa, balse ay lacago badan ugu ballan qaadeyso, waxeyna doonayaan haatan iney siiyaan laba laabka mushaarka uu hadda qaato wax u dhaw.
Pogba wuxuu hadda qaataa 290,000 kun oo Pound, balse Red Devils waxey uga dhigi doontaa hadii uu aqbalo adduun dhan 500,000 kun oo Pound, waxeyna la simeysaa Alexis Sanchez.
Ed Woodward ayaa doonaya inuu kooxda kusii haayo Paul Pogba, laba arrinba wuu doonayaa, midda koowaad oo ah iney xiddigaan ka helaan lacago ganacsi ahaan iyo sidoo kale inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican kubadda cagta booskiisa.
Waa maxay sababta uu Philippe Coutinho isaga diidi doono dalab walba oo kaga yimaada Manchester United?